I-china 2020 entsha yomklami womklamo okhanyayo okunethezeka okupakishwa idada phansi kwesikhwama sokulala ifektri abakhiqizi | Xueruisha
I-2020 entsha yomkhiqizi wokukhanya okhanyayo okunethezeka kwedada elipakishwayo phansi kwesikhwama sokulala
Esinye sezikhwama zokulala ezithandwa kakhulu esihle sokuhamba izintaba, ukuhamba ngebhayisikili, ukugoqa ubhaka nokhempa, iLight Luxury iyithuluzi eliyintandokazi ezinhliziyweni zabahamba ngezinyawo nabahamba emuva, futhi kuyisinqumo esihle kulabo bantu abafuna ukuhlala befudumele emagqumeni ngesikhathi noma yisiphi isizini.
Esinye sezikhwama zokulala ezithandwa kakhulu esihle sokuhamba izintaba, ukuhamba ngebhayisikili, ukugoqa ubhaka nokhempa, iLight Luxury iyithuluzi eliyintandokazi ezinhliziyweni zabahamba ngezinyawo nabahamba emuva, futhi kuyisinqumo esihle kulabo bantu abafuna ukuhlala befudumele emagqumeni ngesikhathi noma yisiphi isizini. Ingasetshenziselwa ingadi yakho, ngemuva kwendlu, ipaki, noma kuphi lapho ungacabanga khona. Uma udinga ukumelana nesimo sezulu esibandayo, lokhu kuzoba umkhiqizo owusizo kakhulu kuwe. Isebenzisa ubuchwepheshe bokuthunga obuthuthuke kakhulu ukwenza ngcono ukuqina komkhiqizo nokuvikela ukuthi phansi kungaphelelwa ngaphakathi. Lesi sikhwama sokulala sinosayizi omkhulu ka-210 × 80cm futhi ilungele abasebenzisi abaningi. Izinga lokushisa elinethezekile eliphakathi kuka-1 ℃ kuye ku-7 ℃ lingahlangabezana nezidingo zekamu langaphandle lansuku zonke. Ukwehliswa komoya okungahambisani nomoya kanye noziphu wokunamathela kwebhande kukhulisa umphumela jikelele wokungenwa umoya nofudumele wesikhwama sokulala. Idizayini yokuvikela ubuso yomuntu eyengeziwe, ikunikeze uhla oluphelele lokuvikela. Sisebenzisa Indwangu yeNayiloni eyi-20-deniel ngokusebenza okuhle kakhulu kokulwa nezinyembezi, phansi-ubufakazi, ukuxosha amanzi. Ngaphezu kwalokho, i-90% idada phansi njengezinto zokugcwalisa, okuyinto engasindi futhi efudumele kakhulu. Kungakusiza ukumelana nesimo sezulu esibandayo. Okungasindi, okulula ukuthwala, okuphathekayo, usayizi omncane wepakethe kanye nokuguquguquka kwemisindo eqhubekayo kuvumela i-Light Luxury ukuthi nayo iguqulele ezinyangeni ezifudumele ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, lesi sikhwama sokulala siyimfashini futhi siyinhlobo esebenzayo, futhi sinikezela ngezinketho ezahlukahlukene zemibala, isitayela, usayizi nokunye. Siyethemba ukuthi uzoyithanda imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo, ngenxa yokuthi sinikele ngakho konke ukuzama ukuthuthukisa nokukhiqiza kakhulu ikhwalithi imikhiqizo yangaphandle. Ngakho-ke, wamukelekile ukubhekabheka iwebsite yethu bese ukhetha eyodwa yazo, ngikholwa ukuthi kumele kube nohlobo olulodwa olungahlangabezana nesidingo sakho. Futhi ungaxhumana nathi, uma ungabaza ngemikhiqizo yethu.
Lapho ukhetha izikhwama zokulala, ngaphezu kokunaka ezinye zezinto eziyisisekelo (njengokusebenzisa izikhwama zokulala, imfudumalo, izinto zokugcwalisa, ukuma, ubude, njll.), Futhi sidinga ukuhlola izikhwama zokulala ozothenga kuzo imininingwane ethile. Ngamafuphi, kunezinhlobo eziningi zezikhwama zokulala, kepha njengeminye imishini yezemidlalo yangaphandle, okubiza kakhulu yikhona okungcono kakhulu. Yilabo kuphela abangahlangabezana nezidingo zakho ngokufanele futhi bafanise imidlalo yakho yangaphandle ongakhetha kuyo kakhulu.
Olandelayo: 2020 ifektri ebusika umuntu omdala ongaphandle wekhempu idada / ihansi phansi isitolo sokulala esikhwameni
Imvilophu Eyodwa Isikhwama Sokulala EsineSol ...
Imibala eqinile enemvilophu eyodwa elele ...
2019 ifektri ebusika abadala amatende yangaphandle / ...
Ukuthungwa kwemibala emibili okungajwayelekile imvilophu elele ...